T2 calme + parking, center, 1 min port & plages - I-Airbnb
T2 calme + parking, center, 1 min port & plages
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguSolange
ekhethekileyo ye-LA Belloy embindini welali yaseCassis, kufutshane nezibuko, iilwandle kunye nazo zonke izinto ezinokusetyenziswa, le flethi okanye indlu ekwicomplex ilungiswe ngokupheleleyo, yaqeshiswa ngendawo yokupaka ekhuselekileyo, inegumbi lokulala elinebhedi eyi-140 cm, igumbi lokuhlala elitofotofo nelanga, ikhitshi elinento yonke kunye negumbi lokuhlambela elitofotofo, iTV kunye neWifi.
Indawo entle onokufumana kuyo okanye uphinde ubone ubuhle beCassis, izibuko layo kunye nobomi balo...
Indawo yokuhlala etofotofo enazo zonke izinto ezifunekayo.
Amanyathelo okucoca aqaqambileyo.
Siyaqinisekisa ukuba izithintelo kunye nokungasondeli ebantwini kuyahlonitshwa.
4.71 · Izimvo eziyi-199
Le flethi isembindini welali yaseCassis, phakathi kweendlela eziqhelekileyo zeProvençal kunye nolwandle oluphakathi esixekweni. Yonke into yenziwa ngeenyawo, imarike ye-Provençal, iivenkile, iivenkile ezincinci zokuyila, ikhefi encinci elunxwemeni!
Umbuki zindwendwe ngu- Solange
Ndifumaneka ukuze ndixelele kwaye ndamkele iindwendwe zam, ndizincede zifumane ikona entle, uhambo oluhle lwendalo, iivenkile zokutyela ezinomtsalane, ukutyelelwa kwee-creeks ngesikhephe kunye nezicwangciso ezintle zalo mmandla... Ukubhatalela imali yokufika emva kwe-20h. Ngaphandle kweeyure zeofisi.
Ndifumaneka ukuze ndixelele kwaye ndamkele iindwendwe zam, ndizincede zifumane ikona entle, uhambo oluhle lwendalo, iivenkile zokutyela ezinomtsalane, ukutyelelwa kwee-creeks ngesi…
Inombolo yomthetho: 13022000169QA
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Cassis